हिलिहाङ दरबार क्षेत्रको विकासमा जुट्दै स्थानीयवासी « Mechipost.com
हिलिहाङ दरबार क्षेत्रको विकासमा जुट्दै स्थानीयवासी
प्रकाशित मिति: ८ माघ २०७७, बिहीबार २१:५५
पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा रहेको हिलिहाङ दरबार क्षेत्र जाने प्रवेशद्वार निर्माणका लागि दक्षिण कोरियामा सङ्कलित रु. ३ लाख ५० हजार रकम निर्माण कार्यका अगुवा सूर्य योङहाङलाई प्रवेशद्वार निर्माणस्थलमै हस्तान्तरण गर्नुहुदै योङहाङ कुलबंश प्रतिष्ठान पाँचथरका अध्यक्ष टेकराज योङहाङ । प्रवेशद्वार निर्माणका लागि स्थानीयवासीको सक्रियतामा रु. १९ लाख रकम सङ्कलन भएको छ । तस्वीरः रवीन्द्र काफ्ले
पाँचथर, ८ माघ
पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा अवस्थित हिलिहाङ दरबार क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा स्थानीयवासी जुटेका छन् ।
तत्कालीन लिम्बुवानका अन्तिम राजा हिलिहाङको दरबार रहेको क्षेत्र तथा दरबार प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वार निर्माण र संरक्षणका कार्यमा स्थानीयवासी लागिपरेका हुन् । हिलिहाङ दरबार क्षेत्रलाई चिनाउन तथा यहाँ आउने पर्यटकहरुको सहजताका लागि प्रवेशद्वार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
हिलिहाङ दरबार क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा सक्रिय स्थानीयवासीहरुको पहलमा रकम सङ्कलन गरी प्रवेशद्वार निर्माण कार्य पूरा गर्न लागिएको हो । २४ फुट लम्बाई र २० फुट उचाईको प्रवेशद्वार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रवेशद्वार निर्माण कार्यको सुरुआत हिलिहाङ फाउण्डेसनले गरेको थियो । तर प्रवेशद्वार करीब छ फुट उचाईसम्म निर्माण भएपछि फाउण्डेसनले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसक्दा वीचैमा रोकिएको थियो । त्यसपश्चात उक्त प्रवेशद्वारको निर्माणलाई पूर्णता दिन यस क्षेत्रका अगुवाहरुले थालेको प्रयासले अहिले सार्थकता पाएको हो ।
प्रवेशद्वार निर्माणको दोश्रो चरणमा स्थानीय अगुवाहरुको पहलमा देश तथा विदेशबाट रु. १९ लाख १ हजार ३५३ रकम सङ्कलन गरिएको थियो । सङ्कलित रकमबाट प्रवेशद्वार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याइएको हो । उक्त रकममध्ये हालसम्म रु. १५ लाख १६ हजार ६४४ खर्च भएको निर्माण कार्यका अगुवा सूर्य योङहाङले जानकारी दिनुभयो ।
पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–४ मा रहेको हिलिहाङ दरबारको भग्नावशेष । तत्कालीन लिम्बुवानका अन्तिम राजा हिलिहाङले वि.सं. १८४४ सम्म शासन गरेको दरबार क्षेत्र संरक्षण अभावमा भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । यो स्थानमा पुरातत्व विभागले पुरातात्विक सम्पदाको रुपमा सूचिकृत गरेको छ ।
तस्वीरः रवीन्द्र काफ्ले
दोश्रो चरणको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्थानीय अगुवाहरु धनराज योङहाङ, सूर्य योङहाङ र विष्णु योङहाङको नाममा संयुक्त बैङ्क खाता सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । खातामा देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट रकम सङ्कलन गरिएको हो ।
गत मंगलबारमात्रै हिलिहाङ–४ घर भई दक्षिण कोरियामा रहनु भएका सरोज योङहाङको अगुवाईमा सङ्कलित रु. ३ लाख ५० हजार रकम निर्माण समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । योङहाङ कुलबंश प्रतिष्ठान पाँचथरका अध्यक्ष टेकराज योङहाङले उक्त रकम खाता सञ्चालकमध्येका सूर्य योङहाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
हिलिहाङ दरबारलाई चिनाउन मेची राजमार्गमा पर्ने याङवरक गाउँपालिका–६ हिलिहाङ चोकमा प्रवेशद्वार निर्माण भइरहेको हो । प्रदेशद्वारको माथि लिम्बू समुदायको मोक्षस्थल कुम्भकर्ण (फक्ताङलुङ) हिमाल, राजा हिलिहाङको शालिक र लिम्बू समुदायको संस्कार संस्कृतिको प्रतीक सिलाम साक्मालाई आकर्षक र ब्यवस्थित रुपमा सजाइने निर्माण कार्यमा सक्रिय योङहाङ कुलबंश प्रतिष्ठान पाँचथरका अध्यक्ष टेकराज योङहाङको भनाई छ ।
प्रवेशद्वारमा निर्माण कार्यमा सहयोग गर्नेहरुको नाम सिलालेखमा राखिने भएको छ । प्रवेशद्वार निर्माणले भग्नावशेषमा परिणत रहेको दरबार क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकको चाप बढ्नुका साथै दरबार क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा आम समुदाय र सरकारी निकायको चासो बढ्ने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ ।
यसअघि हिलिहाङ फाउण्डेसनले राजा हिलिहाङका दुई वटा शालिक निर्माण गरेको थियो । जसमध्ये एउटा हिलिहाङ दरबार क्षेत्रमा राखिएको छ भने अर्को प्रवेशद्वारमा राख्न लागिएको हो ।
दरबार क्षेत्रमा राखिएको शालिक याङवरक–६ घर भई झापामा बसोबास गर्दै आउनुभएका धनराज योङहाङले ब्यक्तिगत लगानीमा निर्माण गरी फाउण्डेसनमार्फत शालिक राखिएको थियो । शालिक स्थापना भएसँगै यो ऐतिहासिक दरबारबारे स्थानीयवासीको चासो बढ्नुका साथै यहाँ पुग्ने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ ।
भग्नावशेषको रुपमा परिणत हिलिहाङ दरबार क्षेत्र अझैपनि संरक्षणविहीन अवस्थामा छ । दरबार क्षेत्रभन्दा अगाडि हिलिहाङ गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमा सङ्ग्रहालय निर्माणको कार्य सुरु भएको छ ।
उक्त निर्माण कार्यमा हालसम्म रु. १ करोड ३६ लाख लगानी भइसकेको हिलिहाङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता मदन गौतमले जानकारी दिनुभयो । सङ्ग्रहालयमा दरबार क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक महत्वका सामग्रीहरु राख्ने तयारी गरिएको छ ।
राजा हिलिहाङ लिम्बुवानका अन्तिम राजा राजा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले वि.सं. १८४४ सालसम्म हिलिहाङ दरबारबाट तत्कालीन याङवरक थुम (जिल्ला)मा शासन गर्नुभएको इतिहास छ । सोही इतिहासको सम्मानस्वरुप गाउँपालिकाको नाम समेत ‘हिलिहाङ’राखिएको छ ।
हिलिहाङ–४ हस्तपुरका वयोवृद्ध नारायणप्रसाद योङहाङका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा संरक्षण अभावका कारण दरबार क्षेत्रका कयौँ सामग्रीहरु हराएका छन् । हिलिहाङ दरबार क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकार र स्थानीयवासीवीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।
हिलिहाङ–३ का विशाल योङहाङ दरबार क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र प्रचार–प्रसारका लागि एकीकृत प्रयास थाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । यसकै लागि स्थानीय सरोकारवालाहरुबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल सुरु भएको उहाँको भनाई छ ।